प्रश्नोत्तर - deshparadesh |सीप, समृद्धि र सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीका लागि
मसँग एजेण्टले ९० हजार माग्दैछ, म के गरौं ?
प्रश्नः मेरो घर सर्लाही हो । म विदेश जान लाग्दैछु । मैले छिमेकी गाउँको एकजना एजेण्ट मार्फत विदेश जाने प्रकृया गरें । अहिले म काठमाडौंमा छु । मेरो स्वास्थ्य परिक्षण भयो । एजेण्टले कतारको लागि ९० हजार माग्दैछ । मैले १० हजार मात्र लाग्छ भन्ने सुनेको छु । म के गरौं ?
उत्तरः हाल सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार तपाईले बढीमा १० हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि तपाईलाई कुनै एजेण्टले सो भन्दा बढी रकम मागिरहेको
उत्तर(अधिवक्ता सुजन पन्त): यो जटिल कुरा हो । कुरा सुन्दा तपाई दुर्इको सम्बन्ध कानुनी रुपमा मात्र पति पत्नि
सेक्यूरिटी गार्डमा जान के गर्नुपर्छ ?
प्रश्नः मेरो नाम गिरेन्द्र थापा हो । मैले स्नातक उत्तिर्ण गरेको छु । देशमा रोजगारी पाइन्न । त्यसैले म बैदेशिक रोजगारीमा सेक्यूरिटी गार्डको काममा जाने योजनामा छु । मेरो उचाई ५ फिट ८ ईन्च छ । मैले कुनै तालिम लिएको छैन । अव मैले के गर्दा उचित होला ?
उत्तरः गिरेन्द्र जी, सेक्यूरिटीको काममा भूपू आर्मी वा प्रहरीलाई प्राथमिकता दिइन्छ । तर त्यसको अर्थ अन्यले जानै नपाउने भन्ने हुन्न । सेक्यूरिटी गार्डको म
प्रश्नः मेरो नाम कृष्ण श्रेष्ठ हो । म हाल युएईमा छु । मेरो घरमा श्रीमतिले अढाई बर्षको बच्चा लिएर कुनै जानकारी नदिई माईत गएर बसेकी छिन् । यसअघि पनि उनले पटक पटक यस्तै गर्दै आएकी छन् । मैले उनलाई घर फर्किन आग्रह गर्दा नआउने र सँगै नबस्ने कुरा गर्छिन । मैले यो अवस्थामा न्याय पाउन के गर्नुपर्छ ? र यस्तो घटनामा सम्वन्ध विच्छेद गर्दा मैले श्रीमतिलाई अंश दिनुपर्छ की पर्दैन ?
उत्तर( अधिवक्ता सुजन पन्त)
विदेशबाट आउँदा गहना कति ल्याउन पाइन्छ ?
प्रश्नः मेरो नाम शिव वोहोरा हो । म हाल युएईमा कार्यरत छु । नेपाल आउँदा काँचो सुन ल्याएमा जफत हुन्छ भन्ने समाचार आइरहेको छ । तर गहना ल्याउन पाइन्छ भन्ने सुनें । के यो साँचो हो ? हो भनें कति गहना ल्याउन पाइने हो ?
उत्तरः शिव जी, पछिल्लो परिवर्तिन व्यवस्था अनुसार सरकारले कम्तिमा १२ महिना(एक बर्ष) विदेशमा विताएर फर्केका व्यक्तिले बढीमा ५० ग्रामसम्म सुनको गहना ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । चाँदिको
विदेशबाट टीभि ल्याउँदा कति भन्सार तिर्नुपर्छ ?
मलेसियामा बढेको तलव नदिए के गर्ने ?
म खाडीका अरु देशमा काम गर्न जान पाउँछु कि पाउँदिन होला ?
यो जुनीमा परिवार भेट्न नपाई म यहि विदेशमै मर्छु होला ?